Liverpool: Waxay u badan tahay in aan la ballaarinin garoonkanaga Anfield
Qorshe la doonayay in lagu sii ballaariyo garoonka Anfield ayaan sii socon karin, sababtuna waa in kooxda Liverpool ay ka walaacsan tahay taageerayaasha ka carooday qiimaha tikitka ee la kordhiyay, lacagta halkaas ka soo baxda ayaana la rabay in loo adeegsado ballaarinta.
Yaa badeli doona Tababare Sam Allardyce?
Yaa badeli doona Tababare Sam Allardyce oo iska casilay tababarenimada xulka Ingiriska
Natiijada ciyaaraha horyaalka Yurub ee xalay dhacay
Halkan ka daalaco jadwalka Natiijada ciyaaraha horyaalka Yurub ee xalay dhacay
Tababarihii xulka qaranka England oo "fadeexad la kulmay"
Macallimka xulka qaranka ee England ayaa iscasilay kaadib markii lagu eedeeyay isdabamarin.
Cayaaraha Horyaallada Yurub ee caawa dhacaya
Siddeed cayaarood oo ka tirsan tartanka horyaallada Yurub ayaa caawa dhacaya
Ururka kubadda cagta adduunka ee Fifa ayaa kala diray guddiga la dagaalanka cunsuriyadda, wuxuuna sheegay in hawshiihii ay dhamaatay
Manchester United ayaa dhulka ku jiiday kooxda Leicester City ee difaacanaysa koobka horyaalka Ingiriiska,
Ryan Giggs oo laga yaabo in uu daneeyo laylyidda Swansea
Ryan Giggs ayaa la sheegayaa in ay suuragal tahay in uu danaynayo in uu tababare u noqdo kooxda Swansea, haddii uu ka tago tababaraha haatan kooxdaasi layliya ee Francesco Guidolin.
Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Arsene, Wenger ayaa sheegay in hubaashii "uusan akhriyi doonin" buug ay qoraaladiisa ka mid yihiin hadallo laga soo xigtay ninka dhiggiisa ah ee maamula kooxda Manchester United, Jose Mourinho, oo leh" waxaan jabin doonaa wajiga ninka faransiiska ah."
Rooney oo iska difaacay dhaleecayn loo jeediyay
Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Wayne Rooney, ayaa dhaleecaynta loo soo jeediyay ku tilmaamay wax aan wax ka soo qaad laheyn.
Labada Manchester oo markale kulmaya
Labada Manchester ee United iyo City ayaa isku arki doona garoonka Old Trafford iyaga oo ay dhex mari doonto ciyaar ka tirsan wareega afraad ee koobka EFL ama League Cup.
Khilaaf u dhaxeeya Toure iyo Guardiola
Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay inuusan Yaya Toure safi doonin ilaa iyo inta uu raalli galin ka siinayo naadiga iyo cayaartoydaba hadal ka soo yeeray ninka wakiilkiisa ah.
Mourinho oo meel fagaaraha ah ku dhaliilay ciyaaryahan
Tababarayaasha xaq ma u leeyihiin inay ciyaartoyda meel fagaare ah ku dhaliilaan? Ama qolka lebiska ayey tahay in lagu canaanto?
Cayaartoy caan ah oo billado dahab ah haysta ayaa waxaa faylashooda caafimaadka kashifay koox ah burcadda kombiyuutarrada jabsata. Ilaa 26 cayaartoy ayaa magacyadooda la soo bandhigay
Guardiola: farxadda taageerayaasha ayaa ka fiican koob
Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in farxadda taageerayaasha ay kala muhiimsan tahay in uu koobab ku guulaysto.
Nin naafo ah oo tartan baaskiil ku dhintay
Waxaa geeriyooday Nin Iiraan u dhashay oo curyaan oo ka qayb qaadanayay tartanka baaskiilka ee dadka lixaad koodu kala dhiman yahay ee ka socda magaalada Rio, kaddib markii uu shil galay isaga oo tartanka ku jira.
Labada kooxood ee Chelsea iyo Liverpool ayaa caawa isaga hor imaan doona kulan ka tirsan Horyaalka England, ciyaar ka dhici doonta garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London
Hay'adda caalamiga ah ee la dagaallanka dawada kordhisa awoodda jirka ee WADA ayaa sheegtay in burcad dhanka internetka ah oo Ruush ah ay shaaciyeen macluumaad caafimaad oo qarsoodi ah oo ay leeyihiin shan iyo labaatan ciyaartoy oo ukala dhashay sideed dal.
Daawo: Xayawaan dabar go' qarka u saaran